50 Qof Oo Ku Dhimatay Diyaarad Ku Burburtay Wadanka Nepal. – Shabakadda Amiirnuur
March 13, 2018 6:41 am by admin Views: 81
Ugu yaraan 50 qof oo rakaab ah ayaa ku dhintay burbur diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga magaalada Kathmandu ee caasimadda wadanka Nepal.
War rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda duulista Nepal ayaa lagu sheegay in ay burburtay diyaarad nuuceedu ahaa S2-AGU, diyaaradda ayaa la xaqiijiyay in ay kusii jeeday magaalada Dhaka ee dalka Banghaladesh.
Diyaaradda Burburtay waxaa la socday 71 qof kuwaas oo iyagoo dhaawacyo ah lagasoo badbaadiyay,guddiga difaaca madaniga wadanka Nepal ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya diyaaradda oo ku gubanaysa meel ka baxsan garoonka.
Dhinaca kale ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay wadanka Iiraan, diyaaradda oo ay la socdeen ganacsado Turki ah waxaa ku dhintay xubno katirsan qoys maalqabeen caan ka ah Turkiga.
Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga ayaa sheegtay in dadka dhintay ay kamid tahay Gabar uu dhalay ganacsade Xuseen Baasharaan, haweenayda dhimatay ayaa ka qeyb geli laheyd xaflad lagu qaban lahaa magaalada Shaariqah ee wadanka isku tagga imaaraatka Carabta